"မိန်းကလေးများသတိထားစရာ ယောက်ျားတို့မာယာ " ************************************** ဇေယျာသူရ8:36:00 AM =>Propose လုပ်နေဆဲကာလမှာ……… ~ သေမလိုရှင်မလို Feel ပြတယ် ရင်မခုန်ဘူး ဒါပေမယ့် ရည်းစားရချ...Read More
"မိန်းကလေးများသတိထားစရာ ယောက်ျားတို့မာယာ " ************************************** Reviewed by ဇေယျာသူရ
ဇေယျာသူရ8:30:00 AM ** ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ အရည်အချင်းမရှိတဲ့ယောက်ျားကိုလက်မတွဲသင့်ပါဘူး။ အဆင်မပြေလို့ပါဆို...Read More
မိန်းမသားတို့၏ မွေးရာပါ စကေးများ သင်သိလား မသိရင်နိပ်ကြည့်
ဇေယျာသူရ8:25:00 AM …. မိန်းကလေးတွေဟာ ယောက်ျားလေးတွေထက် အချိန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှု(Time-management skill ) ပိုကော...Read More
ဇေယျာသူရ7:51:00 AM “မိန်းမဆိုရင်...လှအောင်ပြင်ဖို့ဝဋ်ကြွေးရှိတယ်“ ================================ ကျွန်မတို့မိန...Read More
ပရိသတ်များမျှော်လင့်နေကြတဲ့ ၂၀၁၆ အကယ်ဒမီဆုရှင်စာရင်းများ ပေါက်ကြား.. အပြည့်အစုံ ကြည့်ရန်နှိပ်ပါ။
ဇေယျာသူရ5:38:00 PM 2016 အကယ်ဒမီ ဆုရှင်များအားပေါက်ကြားခဲ့သော ဆုရှင်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး ပူးတ...Read More
ထိုင်းနိုင်ငံက ထူးဆန်းသော သူယောင်ပင် နိပ်ကြည့်နော် လူယောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်တဲ့
အစာလျှော့စားရင်း အစာစားချင်စိတ်ပျောက်ပြီး တစ်နေ့ ပေါင်မုန့်တစ်ခုသာ စားနိုင်တော့တဲ့ မိန်းကလေး . ဇေယျာသူရ1:00:00 AM အစုံ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ် ဖေးကူလန်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ဝိတ်ကျချင်လို့ တစ်နေ့ကို ၂၅၀ ကယ်လိုရီ...Read More
အစာလျှော့စားရင်း အစာစားချင်စိတ်ပျောက်ပြီး တစ်နေ့ ပေါင်မုန့်တစ်ခုသာ စားနိုင်တော့တဲ့ မိန်းကလေး . Reviewed by ဇေယျာသူရ
ယွန်းယွန်း နို့ကိုင်ပြ စိတ်ပျက်စရာ ( ရီစရာ )သတင်း
မွေးစားခြင်းမှသည် ဝါးမြိုခံရခြင်းဆီသို့ ဇေယျာသူရ9:34:00 PM ရှော့ပင်းစင်တာထဲကို ဈေးဝယ်လာတဲ့ ယောက်ျား/ ညစာစားပွဲတစ်ခုကို လာတဲ့ ယောက်ျား တစ်ယောက်ဟာ စွပ်ကျယ်အ...Read More
မွေးစားခြင်းမှသည် ဝါးမြိုခံရခြင်းဆီသို့ Reviewed by ဇေယျာသူရ
အပြာမင်းသမီး ( ပွန်းစတား ) တွေ ကိုယ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကို ကိုယ်ပြန်ကြည့်မိသောအခါ ဇေယျာသူရ10:55:00 PM အောက်က video ကိုနိပ်ရန် Read More
အပြာမင်းသမီး ( ပွန်းစတား ) တွေ ကိုယ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကို ကိုယ်ပြန်ကြည့်မိသောအခါ Reviewed by ဇေယျာသူရ
ဇေယျာသူရ2:24:00 AM အောက်က video ကို နိပ်ရန် Read More
on 2:24:00 AM
ဇေယျာသူရ3:59:00 AMမှဲ့ခြောက်ဟာ ပိုင်ဆိုင်ထားရသူရော၊ မြင်ရသူအဖို့ပါ စိတ်မချမ်းမြေ့စေတဲ့ အရေပြားပြဿနာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။...Read More
on 3:59:00 AM